Shiinaha ZBW (XWB) Taxanaha AC Sanduuqa Nooca Soo Saaraha iyo Alaab-qeybiye | Xinneng
Nooca AC sanduuqa
ZBW (XWB) AC sanduuqa nooca-sanduuqa wuxuu leeyahay astaamaha iskuxir buuxa oo dhammaystiran, cabir yar, qaab dhismeed is haysta, hawlgal nabdoon oo lagu kalsoonaan karo, dayactir habboon, iyo dhaqdhaqaaq. Marka la barbardhigo istiraatiijiyadaha madaniga ah ee caadiga ah, is-beddelka nooca-sanduuqa ah ee isku awoodda ahi waxay leeyihiin aag Sida caadiga ah kaliya 1 / 10-1 / 5 ee kaabashka caadiga ah, taas oo si weyn u yareynaysa culeyska shaqada iyo mugga dhismaha, waxayna yareyneysaa qiimaha dhismaha. nidaamka qaybinta, waxaa loo isticmaali karaa nidaamka qeybinta quwada shabakada giraanta, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa labada qeyb ee korantada ama shucaaca nidaamka qeybinta quwada korantada. Waa nooc cusub oo qalab ah oo loogu talagalay dhismaha iyo isbeddelka saldhigyada magaalooyinka iyo miyiga.
ZBW (XWB) taxane nabar nooca-sanduuqa ah wuxuu la kulmaa heerarka SD320-1992 "Noocyada sanduuqa farsamada hoostooda" - iyo GB / T17467-1997 "Qalabka korantada sare / danab hoose ee horay loo sii diyaariyay".
Tusaalaha iyo Macnahiisa
Xaaladaha Shaqada ee Deegaanka
1. Sarajooggu kama badna 1000m.
2. Heerkulka ugu sarreeya ee heer deegaan kama badna +40℃, ugu hooseeya kama hooseeyo -25℃, iyo celceliska heerkulka 24 saac gudahood ah oo aan ka badnayn + 35℃.
3. Xawaaraha dabaysha ee banaanka ahi kama badnaan 35m / s.
4. Heerkulka isgoyska wajiga hawadu kama badna 90% (+25℃).
5. Xawaaraha jiifka ah ee dhulgariirku kama badna 0.4m / s2, xawaaraha toosanna kama badna 0.2m / s2.
6. Ma jiro meel dab leh, khatarta qaraxyada, wasakhda halista ah, daxalka kiimikada iyo gariirka daran.
Xusuusin: Shuruudaha gaarka ah ee isticmaalka, kala hadal shirkaddayada markaad dalbanayso.
Qalabka korontada ku shaqeeya ee tamarta yar
Ue danab lagu qiimeeyay
Awood darajo Se
Nooca ： 200-1250
Nooca biinanka ： 50-400
Qiimeeyay hadda Ie
Lagu qiimeeyay jabinta hadda
Bedelaadda xamuulka 400-630A
Qalabka isku dhafka waxay kuxiranyihiin fiyuuska
Lagu qiimeeyay waqti-gaaban adkaysiga hadda
Meel sarreysa oo la qiimeeyay
Lagu qiimeeyay sameynta hadda
Awoodda soo noqnoqda ee tamarta iska caabisa min Imin）
Qaraabo dhulka iyo wejiga 42 30
rinjiga: 35/5 min
Jabka go'doon 48、34
Qalalan: 28 / 5min
Qaraabo dhulka iyo wejiga 75 60
Jabka go'doominta 85-75
rinjiga ＜ ＜ 55
Qalalan ： ＜ 65
Fadlan bixi macluumaadka soo socda markaad dalbayso:
1. Foomka nooca sanduuqa nooca;
2. Qaabka Transformer iyo awoodda;
3. Jaantuska jaantuska weyn ee xarigga korantada iyo koronto-yar;
4. Moodooyinka iyo xuduudaha qaybaha korantada ee leh shuruudaha gaarka ah;
5. Midabka Shell;
6Fadlan bixi macluumaadka soo socda markaad dalbaneyso：
6. Magaca, tirada iyo waxyaabaha kale ee looga baahan yahay qalabka dayactirka. Magaca, tirada iyo waxyaabaha kale ee looga baahan yahay qalabka dayactirka.
Hore: Cummins Generator Taxanaha
Xiga: GGD AC Golaha Wasiiradda Qaybinta Awoodda Hoose
Golaha Sanduuqa Qaybinta
Golaha Oem Qaybinta